Maitiro ekuchajisa foni yako zvichienderana nekambani yako
Pamusoro kumusoro nhare
Isu tinorarama munyika umo kutaurirana kwave kwakakosha, ndosaka tichigara takabatana kuburikidza nemakomputa, mahwendefa uye kunyanya nharembozha.
Vanhu vazhinji vanosarudza kuhaya flat prepaid internet rate, vamwe vanodzora chiyero chavo nezvikamu zvidiki nguva nenguva, chero zvazvingava, recharging ichiri nzira inodiwa kune wese munhu.
Makambani ezvekufambiswa kwemashoko anokupa nzira dzakasiyana dzekuchajisa nharembozha, unogona kuchaja mbozhanhare yako pamhepo, kuburikidza nekufona kana pamunhu nekuenda kune vane mvumo.
Isu tinokuudza zvese nezve machaji efoni emakambani makuru mukati nekunze kweSpain.
Wedzera kumusoro mobile online
Parizvino, zvinokwanisika kudzoreredza nharembozha yako kubva mukunyaradza kweimba yako kana kushanda nerubatsiro rwekombuta ine internet.
Mazhinji makambani ekutaurirana anotendera iwe kuti utore yako mbozhanhare recharge nenzira iyi, kwete muSpain chete, asi chero kupi zvako munyika mumasekondi mashoma.
Mabasa ekuchajisa nharembozha pamhepo ari nyore kwazvo, ingo famba uchienda kune webhusaiti yenharembozha, nyora nhamba yefoni uye chiyero chekuchaja.
Nehurongwa uhu, une mukana wekuchengetedza nguva yakawanda yaunogona kushandisa pazvinhu zvakakosha.
Iwe unogona zvakare kuwedzera chiyero chako kubva kune yako mobile. Iwe unofanirwa kuve nekombuta imwe chete ine network yekuwana. Kazhinji, iyo application ndeye mahara uye inowanikwa iOS (muApp Store) uye Android (muGoogle Play), dhawunirodha uye udzore foni yako pese paunoda.
Kunyangwe iyo iri nyore nzira yekukwira iri online, kune zvakare echinyakare masisitimu ekutenga chikwereti. Inogona kuchajwazve ne:
Zvitoro zvakatenderwa uye nzvimbo
Automatic recharge service
Kunyangwe, vamwe vashandisi vanosiyana zvishoma mukuita, ivo vese vanosangana muchinangwa chavo: kudzorera chiyero.
Tevere, tinokusiira iwe runyoro kuitira kuti iwe udzidze zvakadzama maitiro ekuchajisa nhare mune akanyanya kukosha efoni vanoshanda muSpain:
Maitiro ekuchajisa Oi Brazil
Dzorerazve Express TV
Wedzera Postepay prepaid kadhi
Maitiro ekuchairisa Iliad
Prepaid Telekom recharge
Tsika Nuri kadhi recharge
Tarisa nharembozha Isu tinotsanangura maitiro ekuzviita nhanho nhanho!
Wedzera kumusoro Jazzpanda nhare
Recharge Digitel nhare
Wedzera nharembozha neCubacel
Recharge Pepephone nhare
Nzira yekuchaja sei muRepública Móvil?
Recharge nharembozha yeprepaid MásMóvil. Rates
Wedzera nharembozha kubva kubhanga rako
Kunyangwe vanhu vashoma vachizviziva, mabhanga anopawo sevhisi yekuchaja nharembozha zvakachengeteka. Chokwadi ndechekuti masangano akawanda ari kujoinha anofambisa mabasa aya ekubhadhara kune makasitoma avo.Sevhisi iyi inopihwa kumaATM, mahofisi emabhanga kana kubva pawebhusaiti yebhanga kuitira kuti usabve pamba.
Mabhanga echinyakare muSpain anga achipa iyi sevhisi kwenguva yakati. Nekudaro, mamwe mabhanga madiki haasati apinza tekinoroji iyi muhurongwa hwavo. Ngatione pazasi kuti ndeapi mabhangi akachengetedzeka ekuchajisa nharembozha yako.
Mabhanga mazhinji anopawo mobile banking service. Nayo, unogona kudzorera chiyero chako zvisinei kuti uripi, kubva mukunyaradza kwenharembozha yako. Kazhinji, runyoro rwevafambisi venhare vanogona kubhadharwa pasi peiyi modhi yakakura kwazvo, zvekuti hapana anosiiwa.
Wedzera kumusoro Hype prepaid kadhi
Wedzera kumusoro Aldi Talk
Wedzera nharembozha nekadhi
Recharge BBVA mobile
Recharge Santander mobile
Wedzera nharembozha kubva kuING
Recharge La Caixa mobile
Recharge nhare kunze kweSpain
Ikozvino kuchaja nharembozha kunze kweSpain zviri nyore. Paunenge uchifamba kunze kweSpain unogona kuenderera mberi nekutaurirana nemhuri uye neshamwari pasina dambudziko. Nhasi, kune vakasiyana nhare vanoshanda pamusika vanopa iyi sevhisi nemazvo.
Zvakare, kana uine shamwari uye mhuri kune dzimwe nyika, unogona zvakare kuvatumira chiyero nekubhadhara mumaeuro. Nzira yakanakisa yekuchaja nharembozha yako kunze kwenyika ndeye webhu, uchishandisa komputa yako kana kudhawunirodha application kunharembozha yako.
Kune zvakare nzvimbo dzakatarisana kumeso dzinokutendera kuti ubhadhare nharembozha kune dzimwe nyika. Nzvimbo kana masisitimu ane sevhisi iripo ndeiyi: nzvimbo dzekufonera, kiosks, yekuzvishandira kana zvitoro.
Isu tinoziva kuti kuva kure nevadikani vako kunogona kuve kwakaoma, asi nekuda kwemashiripiti ekufonera iwe unogona kunzwa uri padyo navo zvakanyanya. Pano tinokuratidza sarudzo dzinoverengeka kuti urambe uchibatana nevaunoda.
Recharge mobile kubva kuPeru
Recharge mobile kubva kuChile
Wedzera nhare kuMexico
Recharge mbozhanhare yako muVenezuela
Chajazve foni kuEcuador
Wedzera nharembozha kubva kuBolivia
Wedzera nhare kuColombia
Rebtel mbozhanhare recharge pasina komisheni
Recharge Telcel nhare zviri nyore uye nekukurumidza
Recharge Suop mobile nyore uye nekukurumidza
Recharge Soriana mobile
Wedzera kumusoro mobile Movilnet
Wedzera nhare kubva kuDominican Republic
Wedzera kumusoro mobile kuCuba
Dzimwe nzira dzakasiyana dzekuchajisa nharembozha
Sarudzo dzekuchajisa chiyero chembozhanhare yako zuva rega rega dzakakura. Vafambisi venhare vanokupa nzira dzakasiyana dzekuchajisa mbozhanhare, kana iwe usingakwanise kuwana network. Semuyenzaniso, vamiririri vane mvumo vanopa sevhisi yekuchajisa kune vakasiyana siyana vanobata nhare kana zvitoro kwaunogona kutenga makadhi eprepaid.
Aya makadhi eprepaid anouya nemari dzakasiyana dzinokutendera kuti usarudze huwandu hwemari yaunoda kuisa nharembozha yako. Kuzvishandisa kuri nyore, ingo tarisa iyo activation kodhi uye recharge mirairo kumashure.
Rechajazve kana kutenga kadhi rekubhadhara prepaid ku: kiosks, posvo kana mahofisi ekutengesa, zvitoro zvine hunyanzvi, zviteshi zvepeturu, zvitoro zvikuru, masupamaketi, masangano ekufambisa, nzvimbo dzekufonera, nezvimwe.
Kune mitengo inobvumira vashandisi vayo tsvaga uye dhawunirodha isina muganho. Mumusika kune vashandisi vanopa unlimited gigabytes kana nehombe yedata, kuchengetedza muzviitiko zvakawanda zvakafanana kubhurawuza kumhanya.
Kazhinji, marudzi aya emitengo anogona kubvumidzwa mukati memapakeji. MuSpain mamwe emakambani anopa kusingaperi kana kusingagumi kufamba ndeaya: Vodafone uye Yoigo. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kuvashandisa mune dzimwe nyika dzese dzeEuropean Union.
Kune zvakare vashandisi vekuti, kunyangwe mitengo yavo isina magumo, vane nhamba huru ye anenge unlimited gigs kufamba wakadzikama mwedzi wese. Pakati pemakambani aya ndeaya: Movistar, Orange, Simyo, Lowi, MásMóvil neRepública Móvil.
Mitengo pakati pemitengo iripo ichasiyana zvichienderana nedata rakapihwa nekambani yefoni. Izvi zvinosiyana kubva pakugumira kusvika kunenge kusingagumi kubhurawuza kusvika 50 Gb. Mhinduro kune avo vashandisi vanoshandisa zvakanyanya internet.
Ruzivo nezve makuki
Wedzera kumusoro Mobile 2022 - Maitiro ekuchajisa foni yako nhanho nhanho